Big Switch နှင့် Bluelock | Martech Zone
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 22, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် The Big Switch by ကိုစတင်ဖတ်ရှုခဲ့သည် က Nicholas Carr။ သေပြီဆိုသော site မှကောက်နုတ်ချက်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ကကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏စွမ်းအင်ကိုရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်များနှင့်ဒိုင်နမိုများဖြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးအသစ်စက်စက်တည်ဆောက်ထားသောလျှပ်စစ်ဇယားကွက်ကိုချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များမှထုတ်ယူလိုက်သောစျေးပေါသောစွမ်းအင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြောင်းလဲရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးအသွင်ပြောင်းမှုများအားကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့လည်းအလားတူတော်လှန်ရေးကိုပြုလုပ်နေသည်။ အင်တာနက်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အတွက်ကြီးမားသောသတင်းအချက်အလက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့အချက်အလက်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကုဒ်များကိုစတင်ထည့်သွင်းနေကြသည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့တွက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဒါဟာ utility တစ်ခုအသွင်ပြောင်းသွားစေမှာပါ။
အပြောင်းအလဲသည်ကွန်ပျူတာစက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ပြီး Google နှင့် Salesforce.com ကဲ့သို့ပြိုင်ဘက်အသစ်များကိုရှေ့တန်း တင်၍ Microsoft နှင့် Dell ကဲ့သို့သောခိုင်မာတောင့်တင်းမှုကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာထပ်မံရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ စျေးပေါ။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ကွန်ပျူတာသည်စျေးနှုန်းသက်သာသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကဲ့သို့လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အစောပိုင်းသက်ရောက်မှုတွေ့မြင်နိုင်သလဲ မီဒီယာများအားအဖွဲ့အစည်းများမှတစ် ဦး ချင်းစီသို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်၏တန်ဖိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင်၊ အသိပညာလုပ်သားများ၏အလုပ်အကိုင်များတင်ပို့မှု၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတိုးပွားလာခြင်း၌ပင်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အသုံးအဆောင်များတိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှအပြောင်းအလဲများသည်သာကျယ်ပြန့်လာပြီးသူတို့၏အရှိန်အဟုန်သည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်လာလိမ့်မည်။
Big Switch သည်အဖြစ်မှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် နာယက သို့ငါတို့ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံရွေ့လျားနေသည် Bluelock။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာသစ် (ကြော်ငြာဘေးဘားတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့) ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အတွက်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ SaaS ကုမ္ပဏီတွေဟာဟာ့ဒ်ဝဲနဲ့လူတွေရဲ့အဖွဲ့တွေကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးတယ်။ Bluelock သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မှန်ကန်သောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်၎င်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အရင်းအမြစ်များကိုမစိုးရိမ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေနိုင်သည်။ ဒါဟာစိုးရိမ်ပူပန် outsourcing င်!
၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ (IaaS) သည်ထွန်းသစ်စစီးပွားရေးပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးလစဉ်အခြေခံအားဖြင့် IaaS ပံ့ပိုးပေးသူထံမှအိုင်တီအရင်းအမြစ်များကို ၀ ယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ IaaS နှင့်အတူဆာဗာများနှင့် SAN များကို ၀ ယ်ယူမည့်အစား၊ ပရိုဆက်ဆာ Core ၆၀၊ သိုလှောင်မှု terabytes နှစ်ခုနှင့် memory ၆၆ gigabytes များကိုငှား။ လစဉ်သို့မဟုတ်သုံးလတစ်ကြိမ်ပေးချေနိုင်သည်။ ဒီဝန်းကျင်ကနီကိုးလပ်စ်ကသူ့စာအုပ်ထဲမှာပြောတာအတိအကျပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် bandwidth၊ disk space နှင့် processing power များကိုအခြားမည်သည့် utility ကိုမဆိုဝယ်ယူနေသကဲ့သို့ဝယ်ယူနေပါသည်။
IaaS ရောင်းချသူအများစုသည်လည်ပတ်ကြသည် VMWare သို့မဟုတ်အလားတူ operating system ကို virtualization ကိုထက်။ ဤလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ချဉ်းကပ်မှုသည် hardware နှင့်သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုချဲ့ထွင်ရန်၊ ရွေ့လျားရန်၊ ပုံတူကူးရန်ခွင့်ပြုရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရာဝန်ဆောင်မှုပေးသူသို့မဟုတ် hosting စင်တာနှင့် IaaS ပံ့ပိုးသူနှင့်ကွဲပြားခြားနားစေသည်။
ကျနော်တို့ဇန်နဝါရီလအကုန်တွင် Big Switch လုပ်နေပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုယူပြီး Bluelock ကိုဖုန်းခေါ်ပါ။
PS: ဤသည်မှာကမကထပြုသောပို့စ်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်မျှဝေချင်သောအရာတစ်ခုတည်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Tags: ရည်ရွယ်ချက်မီး၁၉၈၁ ခုနှစ်kim dotcomအကြီးစားပန်းချီဆရာခိုးကူးပင်လယ်ဓါးပြပင်လယ်ဓားပြပင်လယ်အော်ခိုးမှု
ဒီဇင်ဘာ 23, 2007 မှာ 12: 14 AM
သို့သော် BlueLock သည် site sponsor တစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ BlueLock ကို Amazon ရဲ့ EC2, S3 နဲ့ SimpleDB ကိုဘာကြောင့်မဖော်ပြတာလဲ။
ဒီဇင်ဘာ 23, 2007 မှာ 11: 31 AM
Bluelock သည်ဤရာထူးအတွက်မဟုတ်၊ စပွန်ဆာပေးသည့်နေရာအတွက်လည်းမပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အခမဲ့နေရာချပေးသည်။ “ Friends & Sponsors” လို့နာမည်ပေးသင့်တယ်။
Bluelock သည် Indiana တွင်လည်းရှိသည် - ငါ Indiana startup များနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ကူညီရန်ကြိုးစားသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အမေဇုံ၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အခြေခံအဆောက်အအုံမဟုတ်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်ဝက်ဘ်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။ ခြားနားချက်မှာကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်းကျင်သည်ရာနှင့်ချီသောထောင်နှင့်ချီသောသူများအားဝေမျှနိုင်သော 'cloud' (Amazon ၏အသုံးအနှုန်း) မှဆွဲထုတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
Bluelock တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဗာများ၊ disk နေရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် virtualized environment တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံတူပွားနိုင်သည်။
SLA's၊ စက်မှုလုပ်ငန်းစံလုံခြုံရေးလုံခြုံရေးလိုက်နာမှု၊ firewall များ၊ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ console လက်လှမ်းမီမှု၊ ၂၄/၇ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးခြင်း၊
မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကြည့်ပါ Bluelock အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်အဘို့။
23:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 05 တွင်
သင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အရ BlueLock သည်ငွေပေးချေသောစပွန်ဆာဖြစ်သင့်သည်
@Douglas: Indiana ကိုကူညီခြင်း
ငါနားလည်ပါတယ်၊ ငါ Atlanta, GA မှာလည်းအတူတူပါပဲ (ကြည့်ပါ http://web.meetup.com/32/)
@Douglas: အမေဇုံဟာအခြေခံအဆောက်အ ဦး ၀ န်ဆောင်မှုမဟုတ်ပါဘူး
BlueLock ၏တူညီသောအဆင့်မဟုတ်သော်လည်း EC2 သည်အခြေခံအဆောက်အအုံမဟုတ်ပါ။
ဒီဇင်ဘာ 23, 2007 မှာ 11: 20 AM
@Mike Amazon EC2 / S3 / SimpleDB နှင့် BlueLock တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုများအကြားထပ်တူကျနေသည်။ ဒါပေမယ့်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရရင်သူတို့ဟာမတူညီတဲ့ဖြေရှင်းနည်းတွေ၊ ကွဲပြားတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပစ်မှတ်ထားတယ်။
သင့်တော်သောနည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတမပါဘဲ Amazon Cluster ကိုတပ်ဆင်။ မရပါ။ EC2 မတူညီသောနမူနာများကိုစီမံရန်တစ်ခုခုကို Architect လုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာတွင်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည့်ပြproblemsနာများစွာကိုလည်းသင်ကြုံတွေ့ရသည်။ EC2 ဥပမာများတွင် static IP များမရှိခြင်း၊ EC2 ဥပမာတွင်ဒေသခံသိုလှောင်မှုမရှိခြင်း၊ S3 သိုလှောင်မှုသည် SAN ထက်သိုသိပ်စွာနှေးကွေးသည်။ Local Disk ကို သုံး၍ SimpleDB သည် SQL query များကိုလက်မခံပါ။ EC2 နှင့် SimpleDB သည်ယခုအချိန်အထိ beta တွင်ရှိနေသေးသည်။ (နောက်တစ်ခုသည်ပုဂ္ဂလိက beta တွင်ရှိသည်) ။ ထို့ကြောင့် SLAs မရှိပါ - သင်၏ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအရေးကြီးသောစီးပွားရေးအပေါ်တွင်မူတည်လိုသည့်အတိအကျမဟုတ်ပါ။
BlueLock သည်အခြေခံအားဖြင့်သင့်အားခေါင်းခဲစရာမလိုဘဲ Windows နှင့် / သို့မဟုတ် Linux ဆာဗာများသိုလှောင်ရာနေရာတစ်ခုကိုအစားထိုးပေးသည် (သို့) သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကိုအမေဇုံတွင်ထားရှိရန်။ ဖုန်းမှအင်ဂျင်နီယာများနှင့်လည်းစကားပြောနိုင်သည်။
ထိုအရာကပင်စတင်ရန်အတွက် Amazon သည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးသင် server စုံတွဲတစ်တွဲသာလည်ပတ်လျှင် BlueLock သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ BlueLock စျေးနှုန်းသည်သမားရိုးကျဒေတာစင်တာများနှင့် ပို၍ တူပြီးသင်ကလစဉ်လတိုင်းအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေမသည်ဖြစ်စေ cpu / disk / bandwidth / စသည်တို့အတွက်အချို့သောငွေပမာဏကိုပေးချေရန်စီစဉ်ထားသည့်ရိုးရာဒေတာစင်တာများနှင့်ပိုမိုတူသည်။
ရှင်းလင်းချက် - BlueLock မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူအနည်းငယ်ကိုငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာ Amazon S3 ကိုထုတ်လုပ်မှုမှာတက်ကြွစွာအသုံးပြုနေတယ်၊ ​​EC2 ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ပါ။ (မှန်ကန်တဲ့ကိစ္စရပ်များမှာ)၊ ကျွန်ုပ်၏ SimpleDB ၏ကိုယ်ပိုင် beta ဖိတ်ကြားချက်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
23:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 08 တွင်
မှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် Ade ။ ငါ Douglas ကို BlueLock ကို Amazon ၏ web service များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ နှိုင်းယှဉ်သော post တစ်ခုရေးရန်တောင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုသင်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့မလိုအပ်ပါ။
PS ခင်ဗျား၊ အင်ဒီးယန်းလူမျိုးတွေအတူတကွလက်တွဲနေကြတယ်။ 🙂
23:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 21 တွင်
ဟေ့! ဟုတ်တယ်၊ မိုက်ကယ်၊
၎င်းသည်ထိုဒေသများအနက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုသေးငယ်ပြီးကုမ္ပဏီနှစ်ခု (သို့) လူတို့အကြားခွဲခြားမှုဒီဂရီအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဒီဆက်သွယ်မှုတွေကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့နဲ့ဒေသတွင်းမှာလည်းစုစည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခွန်သက်သာခွင့်များအလွန်ကောင်းသောကြောင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အကောင်းဆုံးဒေသဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်၏ ၂၀% လျော့နည်းသည်။ ဒါကငါတို့ထွက်ရရန်လိုအပ်သောစကားလုံး! ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ် MidWest ၏သဘောထားသည်ကြီးမားသောခြားနားချက်ဖြစ်သည်။
PS: Ade ၀ င်ရောက်လာတာကို ၀ မ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Bluelock ကိုပြောင်းရွှေ့တာကြောင့်ကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးကိုမသိရသေးပါဘူး😉
23:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 42 တွင်
@Douglass: လူနေမှုစရိတ်နှင့်အခွန်သက်သာခွင့်များကြောင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အကောင်းဆုံးဒေသဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်၏ ၂၀% လျော့နည်းသည်။ ဒါကငါတို့ထွက်ရရန်လိုအပ်သောစကားလုံးပဲ! ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ် MidWest ၏သဘောထားသည်ကြီးမားသောခြားနားချက်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါမူကားသင်၌အသက်ရှင်ရန်ရှိသည် Indiana မင်္ဂလာပါ .... (စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ မတွန်းလှန်နိုင် '-)
23:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 1, 55 တွင်
တွက်ချက်မှုအတွက်အသုံးဝင်သောရပ်တည်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိပြီးချက်ချင်းပင် IaaS ကိုရှုထောင့်သို့ထည့်သည်။ Bluelock ကိုအထူးကုသမှုပေးသည့်တိုင်ဤ post ကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။
Doug post post ။